Seminaar Muqdisho uga furmey garsoorayaasha K/Koleyga + sawiro – idalenews.com
Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga ayaa Seminaar socon doona muddo 30-maalmood ah uga furay Muqdisho garsoorayaasha dhexdhexaadiya ciyaarta kubadda Koleyga.
Furitaankii tababarkaasi ayaa waxaa ka qeyb galay, Xoghayaha GOS Duraan Axmed Faarax, Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Koleyga C/laahi Axmed Nuur (Cadaani), Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Gacanta Maxamed Xuurshe Xasan (Eenoow), Guddoomiye ku xigeenka XKK, Kaaliyaha Xoghayaha XKK iyo Ciyaaryahanno hore ee KK oo halkaa lagu casuumay.
Ugu horreyntii waxaa xafladii furitaanka ka hadlay C/laahi Axmed Nuur Cadaani Guddoomiyaha XKK oo sharaxaad ka bixiyey ujeedada tababarkaasi iyo muhiimadda uu u leeyahay garsoorayaasha oo sida uu xusay in sanado dhowr ah aysan helin Seminaaro aqoontooda kor loogu qaadayo.
“Waxaan dooneynaa inaan dhinacyo badan ka hormarino garsoorayaasha Kubadda Koleyga si ay ula-jaan qaadaan sharciyada casriga ah ee lagu maamulo Kubadda Koleyga, waana bilowga balanqaadyadii aan u balan qaaday bahda kubadda koleyga markii la ii dooranayey dhowaan xilka guddoomiyenimada”ayuu yiri Cadaani oo horey u ahaa Garsoore caalami ah.
Xoghayaha Guddiga Olombikadda Duraan Axmed Faarax ayaa halkaasi ammaan uga jeediyey xiriirka K/Koleyga iyo Garsoorayaasha, isagoo wax lagu faani karo ku tilmaamay hadafka iyo dadaalka Xiriirkaasi ugu jiro kor u qaadidda tayada Kubadda Koleyga ee dalka.
Mr. Duraan ayaa hoosta ka xariiqay in Guddiga Olombikada si wanaagsan ula socdaan dadaalka xiriirada qaarkood ugu dhabar adaygayaan howsha horumarineed xilli laga soo kabanayo marxaladii adkayd iyo bur-burka dalku soo maray.
“Guddiga Olombikadu xiriiradiisa kama hagranayo gacansiinta, wayna ku abaal-marin doonaan xiriirkii sida saxda ah u guta waajibaadkii loo igmaday”ayuu raaciyey xoghayaha oo si rasmi ah u furay Seminaarkaasi.
Daawo: Beelihii ku dagaalamey Mandeera, Kenya oo heshiis xabad joojin ah wada qaatey